Insiza - HSR Prototype Co., Ltd.
ABS & ABS-efana
I-POM / PP / PVC / PBT / PEI
Inkampani Engcono Kakhulu Yezinsizakalo Zokuvikela
I-HSR Prototype Limited inikeza insizakalo yokumisa eyodwa ukuhlangabezana ne-prototyping yakho esheshayo yaseChina nezidingo zokukhiqiza ivolumu ephansi. Sinezinqubo ezihlukile zokukhiqiza:
Ukuphrinta kwe-SLA / 3D
Amakhasimende emhlabeni wonke athanda ikhwalithi yethu kanye ne-China Rapid Prototyping Service. Siyajabula ukusiza amaklayenti ethu ukuthi akhe izingxenye zawo futhi aqinisekise ukwakheka kwawo.
Ukuhlaziywa Komsebenzi Nokusekelwa
Ithimba lethu lobunjiniyela liqukethe ochwepheshe abafundile abanesizinda sokwenza. Iningi lonjiniyela bethu banolwazi olungaphezulu kweminyaka eyi-10. Lapho sithola uphenyo lwakho nefayela le-3D CAD, sizobuyekeza izingxenye zakho ngokucophelela bese siqinisekisa ukwenziwa kwaso. Ngokuya ngolwazi lwethu nesipiliyoni, sizokusiza ekukhetheni indlela engcono kakhulu yokuhlangabezana nezilindelo zakho zekhwalithi nezidingo zebhajethi.
IDupoint, Bayer, BASF, Sabic kanye nabasebenzeli abaningi bezinto ezibonakalayo bangabalingani bethu besikhathi eside esisebenzisane nabo, singanikeza nge-COC ebonakalayo (iSitifiketi Sokuvumelana) kanye nombiko weRoHS ukukhombisa ubufakazi nokuqinisekisa lokho kusetshenziswa i-resin.
Izinhlaka esivame ukuzisebenzisa: ABS, PP, PC, PC + ABS, PA, PA + GF, POM, PMMA, TPE.
Ngaphezu kwalokho, ungakhetha i-resin efanelekile ngokuya ngezinto ezibonakalayo, izinhlaka eziningi zingatholakala ekugcineni kwethu.
Ukubekezelelana okuvamile esikufaka ezingxenyeni zomjovo yi-DIN 16901. Uma udinga ukubekezelelana okuqinile, sihlala sincoma ukuthi wethule lolu lwazi ngokucacile esigabeni sokucaphuna futhi uphinde ukhombe ubukhulu obubucayi kanye nomhlangano kuqala. Izinto zokujova, ukwakheka kwamathuluzi, kanye nejometri yengxenye kuyathinteka ekubekezeleni.
Inzuzo yokukhiqiza ngobuningi
Ngaphezulu kwe-500 ngesivinini esiphezulu, ukucacisa okuphezulu imishini ye-CNC nemishini yokubumba yomjovo womhlaba wonke, iminyaka eyi-10 + yesipiliyoni sokwenza isikhunta, singakunika izinsizakalo ezizungeze konke njengokukhiqizwa kwesikhunta okusheshayo nokujova ukukhiqizwa kwenqwaba kuzuzwe ukusebenza kahle kokukhiqiza futhi kunciphise ngempumelelo izindleko zokukhiqiza, ukuhlinzeka ngohlu oluphelele lwezixazululo ezisheshayo zokukhiqiza ngobuningi.
Inqubo Yokukhiqiza IMisa
okwenza isikhunta, umjovo udini ukukhiqizwa ngobuningi
Ngemuva kokuxazulula ubunzima bokwenza isikhunta, saqala ukwenza isikhunta. Izinto eziyisisekelo zesikhunta zenziwe nge-S136 + ukwelashwa kokushisa, ubulukhuni bungafinyelela kuma-degree angama-48-52, sisebenzisa ama-50C esisekelweni sesikhunta, ngomshini wokugaya / umgodi ojulile wokumba, i-CNC roughing, Ukwelashwa kokushisa, umshini wokugaya, i-CNC ummese wokukhanya, ucingo ukusika, inhlansi kagesi, ukupholisha, inqubo yokuhlangana kwesikhunta ukwenza isikhunta kahle, ekugcineni wenze umjovo.
Imibala eminingi encwadini yamakhodi yePatone iyatholakala ngezingxenye ezibunjiwe ngomjovo futhi sisebenzisa lokhu
incwadi njengezinga lethu legolide lokufanisa umbala. I-pigment, i-Master Batch ne-Pre-color yiyona
izindlela ezintathu ezijwayelekile zokufaniswa kombala enkambeni yomjovo.
Bheka umehluko phakathi kwalezi zindlela ezi-3.
Sinikeza ngochungechunge lwezinsizakalo zokuqedela okuthunyelwe ngezingxenye zomjovo: Ukudweba, i-Electroplating, Ukuphrinta, Ukushaya Okushisayo
Umjovo udini bekulokhu kungenye yezinsizakalo zethu eziyinhloko futhi inkampani yethu inezinsiza zomjovo ezihamba phambili ezingakunikeza insizakalo yokujova esheshayo. Sicela uxhumane nathi ku- info@xmhsr.com ukuthola eminye imininingwane.
Asigcini ngokunikela ngesevisi yamathuluzi asheshayo kepha futhi nenkonzo yesikhunta sokukhiqiza ivolumu efinyelela ku-1 million.
Ikheli: Cha. 260 Tong'an Yuan, Tong'an Industrial Zone, Xiamencity, 361100, Fujian, China